नेपाल आज | 'भारतको बनारस र नेपालको सम्बन्ध, र सम्बन्धभित्रका आर्थिक-राजनीतिक रेखाहरु...'
'भारतको बनारस र नेपालको सम्बन्ध, र सम्बन्धभित्रका आर्थिक-राजनीतिक रेखाहरु...'
बिहिबार, ०४ असार २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । शताब्दीयौंदेखि 'भारतको बनारस र नेपाल' दुई देशबीचको सम्बन्धको मुख्य आधार थियाे । बी.पी. कोइराला नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिकाे पक्षमा खुलेर बहस गर्थे । त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकहरुमध्येका एक पुष्पलाल श्रेष्ठसहित धेरैले ब्यूरोक्रेसी र राजनीति बनारसमै अध्ययन गरेका थिए । सन् १९८० को दशकसम्म काठमाडौं पुग्न सजिलो र सरल बाटो बनारसबाट उडान गर्नु नै थियो।
यात्रु अपर्याप्त भएपछि उडानहरू रोकिए । तर सम्बन्धहरु झन् मजबुत बन्दै गए । आज, नेपाल एयरलाइन्सका लागि सबैभन्दा लाभदायक क्षेत्रहरू काठमाडौं बेंगलाेर हो । यहाँ, नेपाली प्रोग्रामरहरूको बढ्दो उपनिवेशसँगै भारतीय टेक कम्पनीहरुका लागि काम गर्ने नेपालीहरु बढेका छन् । विश्वका लागि सफ्टवेयर बनाउँनेहरुमा नेपालीहरु पनि धेरै छन् । परिवर्तित समीकरणले भारत र एक परिवर्तनशील नेपालको प्रतीकझैं काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा स्पष्ट परिवर्तन भनेको राजतन्त्रको २५० बर्ष लामो इतिहास सकिदै गर्दा नेपाल प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेता प्रचण्डले प्रजातन्त्र (१९९०) र राजतन्त्रको उन्मूलन (२००९) लाई आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दाबी गर्छन् । अधिक व्यापक नेपालको भूमण्डलीकरणको जोखिमबाट सामाजिक परिवर्तन हो । भूगोल पनि परिवर्तनको पक्षमा छ, चिनियाँहरूसँग अहिले हिमालयको माध्यमबाट बोर हुने र अर्थशास्त्र र राजनीतिमा काठमाडौंमा आफ्नो उपस्थिति प्रदर्शन गर्ने क्षमता रहेको छ । नेपालमा निरन्तरता भनेको राष्ट्रवाद हो जुन वास्तवमा भारतविरोधी भावनाहरूको मुखौटा हो । राजनीतिज्ञहरूले यसलाई व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गर्छन्, र यो ब्यूरोक्रेसी, शिक्षाविद् र मिडियामा गहिरो निहित हुन्छ ।
आज प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको नक्शालाई विस्तार गरेर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म विस्तार गरेर राष्ट्रवादीको रूपमा आफ्नो विरासत मजबुद गर्दैछन् । कार्टोग्राफिक आक्रामकता र देशको राष्ट्रिय प्रतीक र संविधानमा नयाँ नक्साको एम्बेडिङ अस्थिर छ र सबै परिस्थितिमा यसलाइ वेवास्ता गर्नुपर्छ । तर यो पहिलो पटक होइन जब नेपालले आफ्नो जनताकाे हितको लागि भारतमा नाक थपथपायाे । २०१५ मा, नेपाली कांग्रेस सरकारले भारतको चासोलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ संविधान अपनाएको थियो ।
अनुहारको बावजुद नाक काट्ने यो वृत्ति खेल परिवर्तन गर्ने ५ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनामा ​​प्रगतिको अभावमा देखिन्छ । नेपालको व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता ४ हजार मेगावाट छ, देशले १ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन गर्छ र भारतबाट ६ सय मेगावाट आयात गर्नुपर्दछ। भारतसँगको पहिचानको राजनीति पनि मुलुकभित्रै देखिन्छ जहाँ तराई (मधेसी)बाट आएका नेपाली नागरिकहरू 'भारतीय' भएझैं भेदभाव को सिकार हुन्छन् । नेपालका लागि उनीहरूको मनोवृत्तिले सानो राज्यको कुरो दर्शाउँछ । भारतका लागि नेपाल अयोग्य देखिन्छ।
१९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएपछि राहदानीहरू बढी स्वतन्त्रताका साथ जारी गरियो र नेपालीहरूले भारत भन्दा बाहिर विश्वव्यापी रूपमा कामका अवसर खोज्न थाले । पश्चिम एशिया र दक्षिण-पूर्वी एशिया विशेष रूपमा श्रम प्रवासको प्रमुख गन्तव्य बने । घरमा माओवादी विद्रोहको साथ असुरक्षाले पनि प्रवासको प्रवृत्तिलाई बढावा दियो । विद्यार्थी र दक्ष कर्मचारी युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, थाईल्याण्ड र यहाँसम्म कि जापान र दक्षिण कोरियामा सर्न थाले । २०१९ सम्ममा देशको सबै भागबाट नेपालको जनसंख्याको लगभग पाँचौं हिस्सा विदेशमा थिए । अनुमानित ८ अर्ब डलरमा, विश्वव्यापी रेमिट्यान्सले नेपालको नाममात्र जीडीपीको करीव ३००% हिस्सा ओगटेको छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स निर्भर देशहरू मध्ये एक हो।
वामपन्थी विचारधारा र अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको प्रमुख उपस्थिति - सम्भवतः द्वन्द्वको समाधान गर्न र गरीबी निवारण गर्नका लागि - यसले नेपालको विश्वको सम्पर्कमा जोड दिएको छ । अन्डररेपोर्ट गरिएको क्रिश्चियन मिसनरीहरूको उपस्थिति हो जसले माओवादी विद्रोहको बखत र त्यसपश्चात नेपालमा प्रवेश गरे । 'विश्वास घरहरू', जसलाई चर्चहरू नेपालमा शिष्टाचारले चिनिन्छन्, तराई लगायत देशभरि गाउँ र शहरहरूमा फेला पार्न सकिन्छ र यसले यूरोपियन र अमेरिकी संगठनहरूलाइ मात्र नभइ कोरियनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यसबाहेक, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र दक्षिण-पूर्वी एशियामा नेपालको शोभा बढाउने अवसरहरू छन् । नेपालको २०११ जनगणनाले देखाउँदछ कि यसको २ करोड ८० लाख जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू थिए र १९६२ देखि यो औपचारिक रूपमा हिन्दू राज्य भइसकेको थियो । २०१५ मा नयाँ संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष देश बनायो ।
सञ्चार टेक्नोलोजीको विस्तारले निश्चित विश्वव्यापीता पनि फैलिएको छ । काठमाडौंले लामो समयदेखि नेपालको विकल्पहरू भारतभन्दा बाहिर फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ। बहुपक्षीय विकास बैंकहरू अहिलेसम्म देशको विकास प्रयासहरूमा सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र प्लेयरहरू हुन् । र वास्तवमा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो सहयोग गर्ने युरोपेली संघ हो । सम्बन्धभित्रका अनेक आयामहरु बुझ्न जरुरी छ ।